Tea nge rosehip
Tea kungashiwo ngempela kubhekwa njengento isiphuzo ezivamile. Kunoma yikuphi izingxenye zomhlaba uzonikezwa inkomishi kule isiphuzo emangalisayo enongiwe. ERussia kusukela ngekhulu nesikhombisa, bephuza itiye zemvelo, futhi phambi okusetshenziswe abantu infusions amakhambi, okuyinto manje ukujabulela ukwanda okukhulu, isibonelo, itiye zasendle rose nezinye izitshalo. Emasimini namahlathi, ungathola inani elikhulu izitshalo ukuthi ingasetshenziswa ukulungiselela yabo. Tea nge rose zasendle ingenye ethandwa kakhulu.
EYurophu lehla ngokushesha inani eminyakeni engaphezu kwamakhulu amabili edlule incwadi yanyatheliswa ongumcwaningi isihambi noKarla Meera, lapho aba ungcono ngani isiphuzo isitshalo yekhofi. Esahlukweni abazinikele izitshalo isiRashiya, engasetshenziswa esikhundleni itiye, umlobi ubhala ezifana: sage, veronica, aluhlaza okwesibhakabhaka kanye strawberry, amagilebhisi ne lime, okusajingijolo futhi willow futhi zasendle rose, amahlamvu, izithelo nezimbali afaneleka ukuze kunyatheliswe sansuku okuthakazelisayo.
Futhi manje abantu abaningi basebenzisa akuyona itiye bendabuko kanye infusions amakhambi ehlukahlukene izitshalo. In the izitolo uzophawula anhlobonhlobo itiye evamile hhayi kuphela, kodwa futhi ezihlukahlukene izithelo noma imbali. abalandeli Iningi infusions enjalo uthanda ukwenza ukuvunwa zabo, okuyinto ivumela nje kuphela ukuze ujabulele isiphuzo elimnandi, kodwa futhi ukuze songe imali. Izinzuzo ukusetshenziswa ezikhishwe of rosehip ngokucacile njengoba kuphakeme kakhulu ezivamile itiye emcimbini. Decoction noma itiye zasendle rose izidingo akukho isingeniso. Its ezinhle kakhulu futhi ewusizo ukusebenzisa ngaphambi sokulala, musa ushukela, noju. Lezi zezinkambi ziwusizo kakhulu izingane nabagulayo, angasetshenziswa njengoba isilinganiso izifo. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-itiye uthuthuva, amahlamvu ezisencane zasendle rose. Ziyakwazi kulula kakhulu ukuba balungiselele ukupheka, futhi ukumnika wabo ocishe afane itiye zemvelo. Banquma wengeze amahlamvu sitrobheli, fireweed, cranberry noma jasmine. Ngokuvamile ishiya rose zasendle futhi omunye izitshalo ezilandelayo zithathwa ngezabelo alinganayo.
Indlela ewusizo itiye zasendle rose?
Itiye kusuka izithelo kanye namakhambi zaziwa kusukela ezikhathini zasendulo awo okwelapha okwelapha, kanye rosehips kulokhu iyathinteka. Iqukethe isamba esikhulu Vitamin C, izakhi yezimbiwa trace, kanye tannins, enenzuzo kakhulu kokudla esiswini yethu. Uma ungeza omisiwe rose itiye hip, kuyoba inqolobane yangempela nomsoco kanye ukulandelela izakhi, okuyinto ingagxila njalo. isiphuzo ezinjalo akufanele baphuze uma unezinkinga blood pressure, isifo senhliziyo. Ingakusiza aphansi amazinga cholesterol emzimbeni. Rose zasendle iqukethe tannins, okuyinto ziwusizo kakhulu kubantu abaphethwe izifo yaleli pheshana emathunjini. Futhi uma umzimba uba buthakathaka imikhuhlane, uyobasiza Vitamin C, okuyinto etholakala itiye. Rosehip ewusizo kubantu abaphethwe isifo sokulahlekelwa igazi noma ukopha kakhulu.
Naphezu kweqiniso lokuthi itiye rosehip kunikeza umbono isiphuzo ewusizo kakhulu, kungase kube labo alulona olwawo wonke umuntu. Akumele sokudliwa kubantu abaphethwe thrombosis, endocarditis balo nokusakazwa ingafaneleki. Uma usebenzisa ukumnika rose okhalweni, bese emva kwalokho okudingeke ukuba hashaza ngamanzi afudumele, njengoba acid ezikuyo kungase zibulale koqweqwe lwawo izinyo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngaphambi sihlanganisani yakho itiye Ukudla ngezimbali zasendle, kufanele ubone enhlalakahleni yabo. Uma usebenzisa le isiphuzo uqaphela Ukuwohloka impilo noma iguliswa ukusabela, kufanele ngokushesha umise ukusebenzisa walesi siphuzo.
Tea ulamula: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Singakwazi yini ukuthinta abesifazane abakhulelwe nabancelisayo itiye ulamula? itiye Delicious - iresiphi
Indlela Balungise wezimbali ngokwakho: amathiphu namasu
Amapaki Military - ithuluzi imfundo yokushisekela izwe wobusha
Udweba kanjani izindebe. Ukufundiswa Wabasaqalayo
Hobby for girls. Njengoba kwenzeka